ငှက်ပိတုန်းတစ်ကောင်လား? ရေလွှာလျှောစီးသမားလား? သို့မဟုတ် အလင်းပန်းချီဆရာ ခရစ်စ်ဂါရစ်ဆန်န် ရဲ့ ဖန်တီးမှု – Digital Photography Myanmar
HomeInspirationငှက်ပိတုန်းတစ်ကောင်လား? ရေလွှာလျှောစီးသမားလား? သို့မဟုတ် အလင်းပန်းချီဆရာ ခရစ်စ်ဂါရစ်ဆန်န် ရဲ့ ဖန်တီးမှု
ငှက်ပိတုန်းတစ်ကောင်လား? ရေလွှာလျှောစီးသမားလား? သို့မဟုတ် အလင်းပန်းချီဆရာ ခရစ်စ်ဂါရစ်ဆန်န် ရဲ့ ဖန်တီးမှု
July 12, 2016 Jedi Inspiration 0
Steel Lafferty competes at Red Bull Wake Rivals in Orlando, FL, USA on 30 April, 2016.
နာမည်ကျော် အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Red Bull ဓါတ်ပုံအဖွဲ့က ကျွန်တော်တို့ အသိုင်းအဝိုင်းထဲက ပူးပေါင်းလာတာသိပ်မကြာသေးပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ပူးပေါင်းမှုဟာ အသက်ရှုမှားလောက်တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေတင်မဟုတ်ပါဘူး ဒီဓါတ်ပုံတွေနောက်ကွယ်က စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ အကြောင်းအရာတွေကို ယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ Red Bull ရဲ့ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံချင်းစီရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ပါရမီရှင် ဓါတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်၊ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းနဲ့ သင်ခန်းစာအချို့ကိုသင်ယူခဲ့ရတာတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ Red Bull content Pool ရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့်သာ ဒီအကြောင်းအရာတွေကို ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောပြနိုင်တာဖြစ်တာမို့ ဆက်လက်ပြီး ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
ပထမအကြိမ် ဒီပုံကို ကြည့်လိုက်ပါ! ငှက်ပိတုန်း တစ်ကောင် လေထဲမှာ ပျံနေတယ်လို့ မိတ်ဆွေထင်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ သေချာပြန်ကြည့်ပါဦး!! ဒီဓါတ်ပုံဟာ တကယ်တမ်းတော့ Florida မှာလုပ်တဲ့ Red Bull Wake Rivals ဆိုတဲ့ပွဲမှာ ဓါတ်ပုံဆရာ ခရစ်စ် ဂါရစ်ဆန်န် က ရိုက်ကူးထားတဲ့ ရေလွှာလျှောစီး အားကစားသမားတစ်ယောက်ရဲ့ဓါတ်ပုံသာဖြစ်ပါတယ်။ မယုံကြည့်နိုင်လောက်အောင်လှပသေသပ်လွန်းတဲ့ဒီဓါတ်ပုံက ကျွန်တော်တို့အတွက် အထင်ကြီးလေးစားဖို့ကောင်းဆိုတဲ့တဲ့စကားလုံးကို ကျော်လွန်သွားလို့ ဒီအပတ်ရဲ့ Spotlight Shot မှာ ဖော်ပြခံခဲ့ရပြီး ဒီဓါတ်ပုံကို ဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးခဲ့တယ်ဆိုတာ သိချင်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ဒီဓါတ်ပုံကို ထုတ်လုပ်သူကို ချက်ချင်းမေးမြန်းဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ဒီဓါတ်ပုံရဲ့ နောက်ကွယ်က အကြောင်းအရာအပြည့်အစုံကိုသိရှိခဲ့ပါတယ်။ ခရစ်စ်တစ်ယောက် ဘာတွေပြန်ဖြေခဲ့လဲဆိုတာ အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အမြဲတမ်းလိုလိုပါပဲ ကျွန်တော့်ဘဝမှာ အလင်းရောင်တွေနဲ့ အလင်းရောင် effect တွေအကြောင်းတွေးတောနေခဲ့တာကြောင့် အခုခင်ဗျားမြင်ရတဲ့ ဓါတ်ပုံထဲကဟာကို ရရှိနိုင်ခဲ့တာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာဘဝ စကတည်းက ကျွန်တော်ရှာဖွေလို့ရနိုင်သမျှ ပစ္စည်းအစုံကိုသုံးပြီး အလင်းကွေးတွေ အလင်းစူးစူးတွေ ထားလို့မရနိုင်လောက်ဘူးဆိုတဲ့နေရာတွေမှာ ထားပြီး အသုံးချခဲ့ပါတယ်။
Red Bull အဖွဲ့ Wake Rivals ပရောဂျက်အတွက် ဆက်သွယ်လာတုန်းကပေါ့ဗျာ၊ ဒီအခွင့်အရေးက ထူးခြားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေဖန်တီးနိုင်ဖို့ ကြီးမားတဲ့ အခွင့်အရေး တစ်ခုပဲဆိုတာ ကျွန်တော်သဘောပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီညကပေါ့ဗျာ စွမ်းအားမြင့် Sharpy Stage မီး ၁၂ စုံအသုံးပြုခွင့်ရယ်၊ Wake Park တစ်ခုစာ ကြိုးအပြည့်အစုံရယ်၊ Red Bull ရဲ့ ထိပ်တန်းအားကစားသမားအချို့ကို ကျွန်တော်အသုံးပြုခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ နွေဦးရာသီကို ဖော်ကျူးနိုင်ဖို့အတွက် Red Bull ရဲ့ အရောင်တွေကိုအသုံးပြုပြီး ဖန်တီးမှုတစ်စုံတစ်ရာကို ကျွန်တော်တို့ လိုချင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဓါတ်ပုံကို Red Bull ရဲ့ Summer Edition မှာ အသုံးပြုမှာလဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲ။
မကြာသေးခင်အချိန်က ကျွန်တော်ဇနီးနဲ့အတူ စိန့် လူစီယာမှာ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည် ခရီးအဖြစ် ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဒီကျွန်းပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ လျှောက်လည်နေခဲ့တုန်းက ငှက်ပိတုန်း အမြောက်အများကို ကျွန်တော်တို့ ရှာတွေခဲ့ပါတယ်။ ဒီငှက်တွေရဲ့ အလွန်လျင်မြန်မှု၊ အားကောင်းမှု နဲ့ တိကျသေချာတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်တာကို ရှာတွေခဲ့သလို သူတို့ရဲ့ သဘာဝလွန် တောက်ပ လှပတဲ့ အသွေးအရောင်ကို သူတို့ရဲ့ အမွှေးအတောင်တွေနဲ့အတူ တွေ့ခဲ့ပါသေးတယ်။ လျင်မြန်တဲ့အရှိန်နဲ့အတူ ငှက်ပိတုန်းတွေ ပျံသန်းသွားတဲ့အချိန်မှာ သူတို့ရဲ့ အရောင်စုံတဲ့အတောင်တွေကြောင့် ကျွန်တော့်အမြင်မှာ အရောင်စုံ အလင်းတန်းတွေ သူတို့ပျံသန်းတဲ့လမ်းကြောင်းတလျှောက် ညနေခင်းမှာ ဆွဲထားသလိုပဲဆိုတာ သတိထားမိခဲ့ပါတယ်။ ဒီ ငှက်ပိတုန်းသေးသေးလေးတွေက ကျွန်တော်တော့ရဲ့ လှပတိကျတဲ့ ရေလွှာလျှောစီးဓါတ်ပုံဖန်တီးဖြစ်အောင် ကျွန်တော့ကိုလွှမ်းမိုးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အရောင်သွေးစုံတဲ့ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံထဲမှာ အားကစားသမားရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကိုမရပ်တန့်ဘဲ ရေထဲကလှုပ်ရှားမှုတွေအကုန်လုံးပါတဲ့ဟာမျိုး ကျွန်တော်ဖန်တီးချင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ ငှက်ပိတုန်းတွေ လေထဲမှာပျံသန်းရင်ထွက်လာတဲ့ အရောင်တန်းတွေနဲ့ တူညီခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီဓါတ်ပုံကို သာမန်နဲ့မတူညီကွဲပြားတဲ့ အမြင်ရှုထောင့်တစ်မျိုးရစေဖို့ အလွန်မြင့်တဲ့နေရာတစ်နေရာကနေ ရိုက်ကူးဖို့လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။
တကယ့်နောက်ဆုံး ဓါတ်ပုံအချောသတ်ထွက်လာတဲ့အချိန်အထိရောက်တဲ့အထိ အခက်အခဲမြောက်များစွာနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ရေပြင်ပေါ်မှာ လှုပ်ရှားနေတဲ့ ပုံရိပ်တွေ လိုအပ်ခဲ့သလို အားကစားသမားကိုလည်း Sharyp မီးလင်းရောင်တွေ ကျရောင်စေဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့ရပြီး အဲဒါက ၃ စက္ကန့်ကနေ ၆ စက္ကန့်လောက် ကြာဖို့လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲလိုမျိုးရိုက်ကူးရာမှာလည်း ၁၂၁ ပေလောက် အမြင့်ရှိတဲ့ တိုင်တစ်လုံး ငှားခဲ့ရပြီး တိုင်ထိပ်ပေါ်မှာ ကင်မရာကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ တပ်ဆင်ဖို့လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကင်မရာကို ဇောက်ထိုးနီးပါး ထားပြီး ရိုက်ကူးခဲ့ရတာဖြစ်လို့ Tripod ကိုလည်းသုံးမရခဲ့ဘူးဗျာ။ Tripod အစား Magic Arm အကြီးစားတစ်ခုအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးကင်မရာကို အမြင့်တစ်နေရာမှာထားပြီး ရိုက်ကူးခဲ့ရတာဖြစ်လို့ PoketWizard အမျိုးအစား remote trigger တစ်ခုအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး setting လုပ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကင်မရာကို တိုင်ထိပ်မှာ တပ်ဆင်ခဲ့ရတဲ့အပြင် ကင်မရာကို တတ်နိုင်သမျှ မလှုပ်ရှားစေဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။
ပြီးတာနဲ့ အားကစားသမားရဲ့ ပုံရိပ်ကို ပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့ အမိအရဖမ်းနိုင်ဖို့အတွက် လိုအပ်လာပြန်ပါတယ်။ ဒီ့အတွက် Elinchrom Ranger Speed AS ၂ လုံးကနေ သုံးလုံးကို A-Head အသုံးပြုပြီး Subject ကို မီးပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီမီးတွေကို ရေကန်ရဲ့ အစွန်းဘက်မှာ နေရာချထားခဲ့ပြီး ပါဝါကို အပြည့်ပေးခဲ့လို့ အားကစားသမားရဲ့ပုံရိပ်ကို ပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့ ရပ်နေသယောင်ထွက်လာအောင်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာတော့ Elinchrom EL Skyport plus နဲ့ မီးတစ်လုံးချင်းစီကို trigger ပေးခဲ့ပါတယ်။ Power Pack တွေလဲ အကုန်လုပ်ဖြစ်ခဲ့လို့ ကံကောင်းပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ ဓါတ်ပုံတိုင်းဟာ ဖန်တီးချင်သလို ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဗျာ။ ပုံတစ်ပုံခြင်းစီမှာ မတူညီပဲ လှပတဲ့ အသွေးအရောင်တွေနဲ့ အတူ အားကစားသမားရဲ့ လှုပ်ရှားမှု၊ ရေစက်စင်ပုံ၊ မီးရောင်ရောစပ်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ပုံတိုင်းကို ကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ပြီး ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတဲ့ ငှက်ပိတုန်း ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို ပြန်လည်ဖန်တီးပြီး နွေဦးရာသီကို ဆင်နွှဲခွင့်ရလိုက်လို့ ဝမ်းသာမဆုံးပါဘူး။
ကိုးကား။ ။ Hummingbird Or Wakeboarder? Get The Story Behind This Surreal Shot By Rebull Photogarphy
ဂျယ်လီငါးတစ်ကောင်ထဲမှာ ထူးထူးခြားခြား ပိတ်မိနေတဲ့ ငါးတစ်ကောင်
June 9, 2016 Jedi 0